Technology and Social - SHARRTZ.ORG
Category: Technology and Social
ဒီနေ့ Application လေး test လုပ်ဖြစ်တယ်။ Test လုပ်မယ်ဆိုပြီး ygnwall art တွေရှိတဲ့ 41,42 st နောက်ဖေးလမ်းကြားရောက်ခဲ့တယ်။ Testing လေးအောင်မြင်တော့ ပျော်ပြီး Share လိုက်ပါတယ်။ ဒီလမ်းလေးမှာလို နောက်ထပ်လမ်းလေးတွေမှာလည်း အမှတ်တရလေးတွေ ဖန်တီးလို့ရအောင် လုပ်ပေးချင်ပါသေးတယ်။ အခု application ပေါ်အမြင်လေးလည်း ပြောကြပါဦး။ သဘောကျသံုးချင်တဲ့သူများရင် play store မှာ free download တင်ပေးမယ်။ Ps. You can see the very talkative me in the video. 😁😁😁
Author Sharr Thet ZawPosted on December 22, 2019 Categories AR/VR, Product testing, Software, Technology and SocialLeaveacomment on SYangon Testing
1D which involves the program data.
2D involvesadesign base upon the data that was program
3D: three-dimensional rendering of the artefact
4D: duration analysis
6D: sustainability assessment
7D: management phase of what has been achieved
Author Sharr Thet ZawPosted on December 11, 2019 October 1, 2020 Categories BIM, Technology and SocialLeaveacomment on BIM Dimension